Vavaky ny Avoindrindra. ? Ho an'ny fiarovana & pirinty | + Mahery
Vavaky ny maheryAmin'ny tranga sasany izay antsoina koa, ny vavaka Magnificent dia mihoatra noho ny vavaka iray, hira iray nadika avy amin'ny Virjiny Maria tenany ary nanandratana ny halehiben'ny Andriamanitra Mahery Indrindra.
I Maria Virjiny, renin'i Jesosy Kristy Tompontsika, dia nanatri-maso ny hery sy ny fahagagana avy amin'Andriamanitra rehefa bevohoka ny asa sy ny fahasoavan'ny Fanahy Masin'Andriamanitra, hitantsika izany ao amin'ny soratra masina.
Ny maha-renin'i Jesosy dia renin'izay rehetra mino ny finoana Kristiana, izany no antony mahatonga an'io vavaka manokana io tena zava-dehibe eo amin'ny vahoaka Kristiana.
1 Vavaky ny mahatalanjona am-boalohany
2 Vavaky ny Magnificent ho fiarovana amin'ny teny latina
2.1 Vavaka atao pirinty
2.2 Inona ny fivavaky ny Magnificent?
2.3 Ahoana ny niandohan'ity vavaka ity ho an'ny virijina?
2.4 Rahoviana aho no afaka mivavaka?
Vavaky ny mahatalanjona am-boalohany
Mankalazà ny Tompo ny fanahiko ary feno hafaliana ny fanahiko, rehefa mandinika ny hatsaram-panahy Andriamanitra Mpamonjy ahy.
Satria izy dia nijery ny mpanompo manetry tena ary nahita ny antony eto satria hataon'izy ireo ho sambatra sy ho sambatra amin'ny taranaka rehetra aho.
Fa izy nanao zava-dehibe sy mahatalanjona ho sitrako, dia Ilay Mahery Indrindra sy ny anarany masina mandrakizay, ary ny famindrampony dia maharitra hatramin'ny taranaka fara mandimby, izay rehetra matahotra azy.
Nitariny ny sandrin'ny heriny, ary nandroaka ny avonavon'ny avonavona Izy, ary nanakorontana ny tetiny.
Noroahiny ny mahery ary atsangano ny manetry tena.
Nameno entana ny mahantra sy ny manankarena tsy navelany.
Nasandrany ny Isiraely mpanompony, ka nahatsiaro azy noho ny famindram-pony sy ny hatsarany.
Araka ny nampanantenainy an'i Abrahama razantsika sy ny taranany rehetra mandrakizay doria.
Mahery vaika ny vavaky ny Magnificat na Magnificat ary azo atao amin'ny fotoana na toe-javatra mitranga.
Misy ireo izay niaina fahagagana mahafinaritra teo afovoan'ity vavaka ity, izay mitranga matetika matetika dia ny fitomboan'ny finoana, izany dia fahagagana eo no ho azontsika hahatsapa ao anatin'ny tenantsika.
Io fehezanteny io dia azo atao amin'ny fiteny tany am-boalohany izay amin'ny teny latinina, na amin'ny fandikan-teny samihafa azy amin'ny fiteny rehetra.
Vavaky ny Magnificent ho fiarovana amin'ny teny latina
ary ny fanahy ratsy ao amin'ny Deo salutari meo,
Ecce enim ex hoc beatam milaza amiko ny taranaka maro.
iza no mamy mangna izay manamboatra?
et banum nomen eius,
et famindra-po tsy ho voan'ny adentes timentibus eum.
Fecit potentiam any brachio suo,
aparitaho ny superbos mind cordis sui,
deposit tele foibe
Fitaovana hery hanome fiarovana ho an'ny tenantsika, fianakaviana, namana na entana ara-materialy toy ny trano, orin'asa na fiara.
Ny vavaka feno ny finoana dia lasa rafitra fiarovana tsara indrindra amintsika amin'ny fanoherana izay rehetra te-hanafika azy.
Sarotra ny handrefesana ny fahefana ny vavaka Koa satria miankina amin'ny finoana napetraka tao, noho izany, fantatsika fa ny fampitaovana hampahomby ny vavaka ity dia ny mino.
Vavaka atao pirinty
Fantatsika fa zava-dehibe ny fananana ireo vavaka foana.
Izay no nahatonga azy hivavaka eto ambany hanonta. Azonao atao ny manonta mba hivavaka izany amin'ny fotoana rehetra na aiza na aiza tianao.
Inona ny fivavaky ny Magnificent?
Tany am-piandohana io didim-pitsarana io dia natao tamina fikasana ambarao ny fahalehibeazan'Andriamanitra amin'ny alàlan'i Maria hitondra ny mpamonjy an'izao tontolo izao.
Androany ity vavaka ity dia mbola natao ho fankasitrahana an Andriamanitra noho ny namonjeny antsika tamin'ny fotoan-tsarotra, noho ny fahagagana sasany azony sy ireo fambara fankasitrahana hafa izay mety ho azontsika manokana.
Hira azo ampiasaina hangataka fiarovana, ho an'ny mpamosavy, fanampiana, fampiononana, finoana ary fahagagana mahatalanjona.
Tahaka ny vavaka rehetra dia mahery ary natsangana mba hahafahantsika mampiasa izany amin'ny fotoana izay tena ilaintsika indrindra.
Ahoana ny niandohan'ity vavaka ity ho an'ny virijina?
Vavaka na hira nentanin 'Andriamanitra tokana azontsika jerena mora foana ao anatin' ny soratra masina, indrindra ao amin 'ny Bokin' ny Filazantsara Araka ny voalazan 'i Saint Luke ao aminny toko 1, andininy faha-26 ka hatramin’ny 25.
Lahatsoratra feno fankasitrahana an'Andriamanitra ary aiza ny Maria Virjiny mahatsapa ny halehibeazana sy ny herin 'Andriamanitra ray.
Andininy iray ao amin'ny Baiboly izay nampianarin'i Maria antsika fa tsy afaka ny tsy hisian'ny fisaorana an'Andriamanitra, miaraka amin'ity vavaka mahafinaritra ity dia afaka mianatra isika fa ny fizotran'Andriamanitra, na dia tsy azontsika aza, dia mitondra fitahiana eo amin'ny fiainantsika hatrany.
Ary toa an'i Maria izay niandry ihany koa hanambady ary nifarana tamin'ny fitondrana vohoka tamin'ny alàlan'ny asa sy ny fisaorana ny Fanahy Masina, toe-javatra sarotra iray izay fantany ny fomba hiatrehana andraikitra sy fahendrena hitondrana ny Mpamonjy eto amin'izao tontolo izao.
Tsy misy andro na ora hanaovana vavaka.
Tsy maintsy mivavaka ianao rehefa manana finoana sy sitrapo. Tsy mampaninona ny fotoana, ny zava-dehibe dia ny mino ny herin'ny vavaka.
Minoa foana amin'ny herin'ny Virjiny. Izay no zava-dehibe indrindra.
Hararaoty ny herin'ny vavaka ataon'ny Magnestent. Tena mahery izy!